Factory Stand TV - Mpanamboatra TV Stand China
YF-H-906 latabatra kafe boribory mahitsy + fijoroana amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny vatasarihana rotatable amin'ny White & oak
Omeo fomba sy hatsaran-tarehy ankehitriny ny toeranao miaraka amin'ity latabatra kafe 2 ity.
Drafitra miavaka miaraka amin'ny fiangaviana maoderina, ity fipetrahana fahitalavitra maharitra sy latabatra kafe ity dia safidy tsara ho an'ny efitranonao.
Latabatra CFee multifunction YF-H-903 latabatra dinging
Drafitra miavaka miaraka amin'ny fiangaviana maoderina, ity fipetrahana fahita lavitra tsy manam-paharoa ity dia ho safidy tsara ho an'ny efitranonao fialamboly. Manasongadina ny famolavolana maharitra azo ampiasaina, azonao atao ny manitsy ny halavany mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ary ny sombin-kazo manitatra dia manome toerana fanampiny hanehoana ny bokinao, ny sarin'ny fianakaviana, ny haingon-trano ary maro hafa.
YF-H-901 Fahitalavitra Mijoroa haino aman-jery 3-Drawer miorina miaraka amin'ny frame volamena sy tampon'ny fitaratra milamina
Raha mitady sanganasa endri-javatra ianao mba hanakorontanana tokoa ny toerana onenanao dia izao no izy! Tena tsara tarehy sy maoderina izy io, azo antoka fa handray afovoany ao amin'ny efitranonao ianao. Ny fotsy vaovao dia mety amin'ny famoronana atmosfera milamina. Ny loko rehetra dia maneho taratra tsara tarehy tsy an-kijanona amin'ny farany matevina koa.
YF-H-907 efitrano fandraisam-bahiny vita amin'ny hoditra
Ny lamina misy ny jeometrika dia mihaona amin'ny tabilao malama, izay mahatonga azy io ho an'ny ankohonana ankehitriny.
YF-H-905 fahitalavitra mijoro miaraka amin'ny Drawers & Doors amin'ny volamena
Na nifindra trano vaovao ianao tato ho ato, na nanapa-kevitra ny handoko indray ary mila fijanonana TV vaovao hiaraka amin'ny efitranonao, dia misy safidy am-polony maro.
YF-H-904 Latabatra fitehirizam-bokatra fotsy mitsangana + TV mitsangana
Luxury Modern: famolavolana maivana miaraka amina famaranana volamena manjelanjelatra dia manome taratra mamirapiratra amin'ny toerana rehetra, mety amin'ny fampiasana azy hanodinana endrika maoderina. Ny latabatra kafe dia hanampy endrika mamirapiratra sy maoderina amin'ny efitrano rehetra ao an-trano miaraka amin'ny endriny marevaka, famaranana gloss fotsy mangirana.
YF-H-900 fahitalavitra volamena mihaja
Mijoroa maoderina Gold Mirrored Media Console miaraka amin'ny 6-Drawer & Glass Top vita amin'ny MDF, vera maotina ary vy tsy miovaova hahazoana antoka maharitra.
YF-H-700 famaranana manjelanjelatra sy fahitalavitra famolavolana milahatra madio
Fitaovana rindrina fahitalavitra maoderina misy zoro MDF fotsy manjelanjelatra
Fijerena fahitalavitra mahafinaritra izay manome fitaovana fitehirizana avo lenta izay handraisana ny efijeryo ary hifanaraka tanteraka amin'ny efitrano rehetra.